Jiri gvSIG dị ka oghere Open Source
Geofumadas kpuchiri onwe ya ụbọchị atọ nke 15th International Conference of gvSIG na Valencia. N'ụbọchị nke abụọ, e kewara nnọkọ ahụ na mgbochi 4 dị ka ọ dị na ụbọchị gara aga, na-amalite na gvSIG Desktop, ebe a ka ekpughere ihe niile metụtara akụkọ na njikọta na sistemụ ahụ. Ndị na-ekwu okwu mgbochi mbụ, ...
15th International gvSIG Conference - ụbọchị 1
15th International gvSIG Conference malitere na November 6, na Higher Technical School of Geodetic, Cartographic na Topographic Engineering - ETSIGCT. Ndị ikike nke Polytechnic University of Valencia, Generalitat Valenciana na General Director nke gvSIG Alvaro Association mere oghere nke mmemme ahụ.
Geospatial - GIS, GvSIG, innovations
14as International gvSIG Conference: «Economy na Production»
Technicallọ akwụkwọ na-ahụ maka teknụzụ dị elu nke Geodetic, Cartographic na Topographic Engineering (Polytechnic University of Valencia, Spain) ga-anabata ndị ọzọ, ruo afọ ọzọ, gvSIG International Conference , nke a ga-enwe site na Ọktoba 24 ruo 26 n'okpuru okwu a "Economy and Productivity" . N'oge ogbako ahụ, a ga-enwe nnọkọ dị iche iche nke ngosi (ọchịchị obodo, Mberede, Ọrụ Ugbo ...), A ga-enwekwa ...
Development na Free Software dị ka mgbanwe engine
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile adịla njikere maka 7th gvSIG Latin America na Caribbean Conference, nke a ga-eme na Mexico. Anyị na-atụle ihe bara uru na mgbakwunye nke ụlọ ọrụ ọha na eze, nke na-achịkwa sọftụwia na-achịkwa kwa afọ, usoro n'ọtụtụ ọnọdụ malitere site na mmejuputa ọrụ ego mba ofesi na ...
Akụziri CAD / GIS, GvSIG
Agbamume bara uru maka gvSIG - Onyinye Chama Aka Europa
Ọ dị mma ịmara na gvSIG anatala onyinye mba ụwa n'oge Nsogbu Europa n'oge na-adịbeghị anya. Onyinye a na-enye ohere maka ọrụ nke na-eweta ọhụụ na azịza na-adigide nye obodo ụwa. N'ezie, ọ bụrụ na ha tinye mgbakwunye agbakwunye na INSPIRE Initiative ma jiri teknụzụ dị na ...
GVSIG gọọmentị ọhụrụ na weebụ
Anyị na-akpọsa mmalite nke usoro ndebanye aha maka gvSIG-Training Distance Courses, na nkebi nke abụọ nke 2014, nke bụ akụkụ nke onyinye nke Asambodo Mmemme nke gvSIG Association. N'oge emume nke iri nke ọrụ gvSIG, ọtụtụ n'ime ihe ọmụmụ a na-efu, yana agụmagụ n'efu gụnyere ...
2014 - Nkowa di nkenke banyere onodu Geo
Oge eruola ka m mechie ibe a, na dịka ọ na-eme na omenala nke anyị bụ ndị na-emechi usoro kwa afọ, ana m atụfu ahịrị ole na ole nke ihe anyị nwere ike ịtụ anya na 2014. Anyị ga-ekwu okwu karịa ma emechaa, nke bụ afọ ikpeazụ: N'adịghị ka sayensị ndị ọzọ , na nke anyị, a na-akọwa ọnọdụ dị iche iche site na gburugburu ...
AutoCAD-AutoDesk, Geospatial - GIS, GvSIG, manifold GIS, Microstation-Bentley, SuperGIS, uDig, ọtụtụ
Na nnwere onwe na ọbụbụeze - ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile dị njikere maka nzukọ 9 gvSIG
A mara ọkwa ọgbakọ gvSIG nke itoolu, nke ga-eme n'izu ikpeazụ nke Nọvemba na Valencia. Site na ụbọchị nke abụọ, a na-eji okwu mkparị eme ihe mgbe niile nke na-egosi mgbado nke nkwukọrịta ụlọ ọrụ nke ụbọchị ga-enwe. N'ịmeghachi azụ, ndị a bụ isiokwu nke ọgbakọ ...
gvSIG 2.0 na Njikwa Egwu: webinars 2 na-abịa
Ọ bụ ihe na-atọ ụtọ ka otu obodo ndị mmụta mmụta ọdịnala si agbanwe, na ihe achọrọ tupu oge ọgbakọ mkparịta ụka yana nsogbu ya nke ụzọ na ohere, site na iPad enwere ike ịgba akaebe site na ebe ọ bụla n'ụwa. N'okwu a, ọ dị ezigbo nso ịmepụta webinars abụọ nke anyị niile kwesịrị iji, na-atụle nke maka ...
Akụziri CAD / GIS, Geospatial - GIS, Google Earth / Maps, GvSIG
Kedu ihe ụdị gvSIG 2.0 ọhụrụ pụtara
Anyị nwere nnukwu olile anya na anyị na-akpọsa ihe gvSIG Association agwala: ụdị nke gvSIG 2.0 nke ikpeazụ; Ihe oru ngo nke n'arụ ọrụ n'otu ụzọ yiri ihe 1x na mmepe ruo ugbu a hapụrụ anyị afọ ojuju na 1.12. N'ime akwụkwọ akụkọ ndị a, ụdị a nwere ụkpụrụ mmepe ọhụụ, na ...
SuperGIS na Desktọpụ, ụfọdụ atụnyere ...
SuperGIS bụ akụkụ nke ụdị Supergeo nke m kwuru maka ya ụbọchị ole na ole gara aga, yana ezigbo ihe ịga nke ọma na mpaghara Eshia. Mgbe m nwalere ya, lee ụfọdụ n'ime mmetụta m weere. N'ozuzu ya, ọ bụ ihe ihe mmemme ọ bụla ọzọ na-eme. Ọ nwere ike na-agba ọsọ na Windows, ikekwe ọ mepụtara na C ++, maka ...
November, 3 isi ihe na mpaghara ntanetị
N’ọnwa nke opekata mpe ihe atọ ga - eme nke ga - ewe ihe site na nkenke m ... na oge ezumike m. 1. SPAR Europe Ọ ga-abụ na Holland, na Hague na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ụbọchị ahụ ka e kpalite mmụọ nsọ Ihe omume a na-eweta ọnụ ọgụgụ ndị ọhụụ na teknụzụ 3D, ọkachasị site na Europe ebe ọ bụ…
gvSIG Batoví, e nyefere nkesa izizi nke gvSIG maka Mmụta
Omume nke internationalization na ike nke gvSIG Foundation na-achụ bụ ihe na-atọ ụtọ. Enweghị ọtụtụ ahụmịhe yiri ya, ọ dịbeghị mgbe ngwanrọ na-enweghị sọftụwia etolitela ka ọ dị ugbu a, na ọnọdụ nke kọntinent niile nke na-ekerịta asụsụ gọọmentị na-atọ ụtọ. Bịaru ọkwa azụmaahịa amalitela, iru ọkwa agụmakwụkwọ ...
Usoro GvSIG na-etinye aka n'enyemaka n'ókèala
N'isochi uzo nke usoro nke gvSIG kwalitere, anyi nwere obi uto ikwuputa mmepe nke uzo nke a gha emepe ya site na iji gvSIG etinyere usoro oru ala. Usoro a na-ahụ maka CREDIA, atụmatụ na-atọ ụtọ nke emere n'ime atụmatụ nkwado nke Biological Corridor Project ...
Site na i3Geo na 57 Ngwá Ọrụ Ọha na Ọha nke Brazil
Taa akụkọ a abịarutela njikọ nke mbọ dị n'etiti i3Geo na gvSIG, isiokwu nke dị m ka mkpebi dị mkpa site na gvSIG Foundation, n'agbanyeghị na amaara m na ọ bụ ihe a na-ahụ anya nke ọrụ niile na-ewe ọtụtụ ọnwa nke atụmatụ na atụmatụ nke mba ụwa. Saịtị ndị ọzọ ga-ekwu maka ya ma anyị ga-amata ọtụtụ ihe ...
Ebee ka ndi gvSIG ji eme ihe
Bọchị ndị a ga-enye webinar na gvSIG iji mụtakwuo banyere ọrụ ahụ. Agbanyeghị ebumnuche siri ike nke a bụ ahịa ndị na-asụ Portuguese, dịka a na-eme ya n'ime usoro ihe omume MundoGEO, ogo ya ga-aga n'ihu, yabụ anyị jiri ohere nyochaa ụfọdụ ọnụ ọgụgụ dị na ...
GvSIG, Internet na Blogs
10 40 + n'ihu nke ogbako SIG libre 2012
Ihe karịrị 40 isiokwu nwere ike ime na nke isii nke SIG Conference na Girona ekwuputala ọkwa. Ikekwe otu n'ime ihe ndị mere na ọnọdụ Hispaniki nke nwere mmetụta dị ukwuu na ọhụhụ nke OpenSource gbadoro ụkwụ na Geographic Information Systems. Dịka ọmụmaatụ m ga-ahapụrụ gị egwu 10 nwere ...
Geographica malite n'afọ ọhụrụ na nkuzi GIS ọhụrụ
Ọnwa ole na ole gara aga ka m na-agwa gị gbasara ọgwụ GIS nke Geographica, na-agbaso ihe ụlọ ọrụ a na-eme taa.Achọrọ m ịgwa gị maka ihe na-aga afọ 2012 n'ihe gbasara ọzụzụ a na-enye na mpaghara ahụ. 1. Agụmakwụkwọ na ArcGIS, gvSIG, QGIS na ndị ọzọ Geomatics ngwọta Nke a ...
Akụziri CAD / GIS, GvSIG, qgis
Page 1 Page 2 Page 3 ... Page 5 Next page